चामल कसरी पकाउने - सुझावहरू र महान विचारहरू!
रोस्टरमा बेक्ड आलु कसरी बनाउने
ट्याकोमा कति औंस मासु
पकाउनु अघि वा पछाडि क्यासरोल स्थिर गर्नुहोस्
चामल कसरी पकाउने
चामल कसरी पकाउने - चामलको उत्तम फ्लफि प्याला कसरी पकाउने भनेर जान्न गाह्रो छैन! चामल मेरो १ year बर्षे छोरीको मनपर्ने खाना हो र हामी यसलाई प्रायः आफ्ना भोजनको साथ सेवा गर्दछौं (र चामलको हलवाको लागि अतिरिक्त बनाउँदछौं वा भुटेको भात )!
चीजहरू पिज्जा रोलहरूसँग
यो सजिलो स्टेपल शीर्ष साइडको साथ उत्तम साइड हो सजिलो मंगोलियाली बीफ वा हाम्रो मनपर्ने क्रक पटमा बौर्न चिकन !
उत्तम धान कसरी पकाउने
चुलो स्टोभमा धानको चावल उत्तम छ! मलाई चामललाई साइड साइडको रूपमा मन पर्छ, हल्का फ्राई वा हाम्रो मा मिठाईको रूपमा पनि मनपर्ने चामल पुडिंग विधि ! चावल जस्तो देखिन्छ कि यो बनाउन वास्तवमै सजिलो छ जस्तो देखिन्छ, यो कहिलेकाँही स्टिकि वा गुई बाहिर आउन सक्दछ यदि सही पकाइएको छैन भने (वा कडा छ भने कडा)।
एकचोटि जब तपाईंलाई सही अनुपात र समयहरू र केहि थोरै सुझावहरू थाहा हुन्छ (जस्तो कि यो पकाउँदै गरेको कुनै झुकाव छैन) तपाईंले प्रत्येक पटक चामलको उत्तम कचौरा पाउनुहुनेछ!
चामलमा पानी अनुपात
सहि चामल पानी अनुपात १: २ हो। तपाईलाई १ कप चावल र २ कप पानी (वा कुनै सापेक्ष भाग) चाहिन्छ।
एक पाउन्डमा चामलको कति कप? त्यहाँ एक पाउन्डमा २ कप चावल छन् र प्रत्येक कप सुख्खा चामलले cooked कप पकाइएको चामल उत्पादन गर्दछ (एक पाउन्ड सुख्खा चामलले cooked कप पकाइएको चामल उत्पादन गर्दछ)।
चामल सामान्य रूपमा पकाउनको लागि धेरै सजिलो हुन्छ तर कहिलेकाँही यो टाँसिएको अन्त्य हुन सक्दछ (जब सम्म तपाईं सुशी बनाउनुहुन्न) तपाईं चाहानुहुन्न! यो निश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले ठीक समयको लागि पकाउनु भएको छ त्यसैले यो पकाइएको वा पकाएको भन्दा बढी छैन!
यहाँ केहि सुझावहरू छन् निश्चित गर्न तपाई प्रत्येक पटक राम्रा चामल चामलहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
कुल्नु: तपाईंको चावललाई थप स्टार्चहरू हटाउन द्रुत कुल्ला दिनुहोस्, यसले यसलाई टाँसिनबाट बचाउँदछ।
अनुपात: १ कप सेतो चामलको अनुपात २ कप पानी प्रयोग गर्नुहोस्।
नडराउनुहोस्: जब तपाईं पहिले चामल थप्नुहुन्छ, यसलाई एक वा दुई द्रुत स्टर्स दिनुहोस् र त्यसपछि यो हल्लाउनबाट बच्नुहोस्। भद्र भातले स्टार्च रिलिज गर्न सक्छ र यसलाई टाँसिन सक्छ।
कुनै पिकिंग छैन: एक पटक तपाईंको चावल उमालेको पानीमा थपियो भने, तापक्रमलाई कम तताउन तल राख्नुहोस् र ढकनी नगर्नुहोस्।
आराम गर्न अनुमति दिनुहोस्: एकचोटि समय सकियो, तातोबाट हटाउनुहोस् र minutes मिनेट बस्नुहोस् (कुनै पिकनिंग छैन)। एक पटक यो minutes मिनेट आराम गरीसकेपछि, सेवा दिनु अघि कांटाको साथ फ्लफ गर्नुहोस्।
एक मेमोरी जार कसरी बनाउने
बाँकी धान छ?
बाँकी पकाइएको चामल चाँडो चाँडो चिसो गरिनु पर्छ र तीन दिन सम्म फ्रिज गर्न सकिन्छ।
के तपाईं पकाएको चामल फ्रीज गर्न सक्नुहुन्छ? हो, बाँकी चामल केवल केही मिनेटमा द्रुत र सजिलो पक्षहरूको लागि छ महिनासम्म फ्रिज गर्न सकिन्छ। यो सूप र स्ट्युज, क्यासरोलहरू थप्नको लागि उपयुक्त छ वा साईड डिशको रूपमा तातो पनि!
धान कसरी गरम गर्ने
चामल सजिलै स्टोभ माथि वा माइक्रोवेभमा गरम गर्न सकिन्छ। चामलको प्रत्येक कप र कभरको लागि दुई बड़ा चम्चा पानी वा शोरबा थप्नुहोस्। स्टोभमा करीव minutes मिनेट वा माइक्रोवेभ ओभनमा १-२ मिनेट। फ्रिज भएको चामलका लागि तपाईंलाई थोरै थप समय चाहिन सक्छ।
चामल भन्दा बढी परोसन व्यंजनहरू
मिठाई र खट्टा मीटबलहरू
फ्राई Veggies हलचल गर्नुहोस् - सजिलो!
कुखुरा करी - परिवार मनपर्ने!
१ Be बीन स्लो कुकर चिली - खेल दिनका लागि उत्तम!
इजी स्विस स्टेक - आराम खाना!
तयारी समयदुई मिनेट कुक समय१ मिनेट विश्राम समय। मिनेट कुल समयबीस मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन पूर्ण रूपमा पकाइएको प्रकाश र फ्लफि भात बनाउन सजिलो छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ कप चामल
▢दुई कप पानी
सासप्यानमा पानी राख्नुहोस् र फोकामा ल्याउनुहोस्।
चिसो चिसो पानी अन्तर्गत कुल्ला (वैकल्पिक)।
उबलते पानी मा एक चुटकी नुन र चामल जोड्नुहोस्। कभर र गर्मी कम एक कम।
१ 18 मिनेट पकाउनुहोस्।
तातोबाट हटाउनुहोस् र थप minutes मिनेट (कुनै हेराई छैन) कभर बस्न दिनुहोस्।
काँटा र फ्लु संग फ्लफ।
केहि ब्रान्डको चावल चाँडै पकाउन सक्दछ (१-18-१-18 मिनेट) तर प्राय: जसो १ 18 मिनेट चाहिन्छ।
कीवर्डकसरी, चामल कोर्सअतिरिक्त खाना पकाइयोएशियाई© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।